Mooshin xil ka qaadis Madaxweyne Farmaajo • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Federal Republic of Somalia / Mooshin xil ka qaadis Madaxweyne Farmaajo
December 9, 2018 - By: Mohamed Jeenyo
Xafiiska Guddoomiyaha Golaha Shacabka ee baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ayaa si rasmi ah u qabtay mooshin ay soo gudbiyeen xildhibaano doonaya in xilka laga xayuubiyo Madaxweyne Maxamed Cabdullahi Farmaajo.
Qoraalka Mooshinkan ayaa maanta oo ah Axad 9ka December si rasmi ah u galay diiwaanka xafiiska Guddoomiyaha Golaha Shacabka sida ka muuqata sawirka hoose oo ay Horseed Media heshay.
Weli guddoonka Baarlamaanka faah faahin kama bixin mooshin ay aqbaleen inay qabtaan, waxaana la sugayaa xog dheeraad ah oo ku saabsan tirada xildhibaanada mooshinkan ku saxiixan, mooshinka guddoonka uu qabto ayaa laga rabaa inay buuxiyaan sadex meelood hal meel tirada Golaha Shacabka.
Waxaa bilihii lasoo dhaafay socday kulamo hoose oo ka dhacayey Muqdisho iyo dibada oo ay wadeen xubnaha sida weyn uga soo horjeeda Xukuumada talada heysa, waxaana horey loo hadal hayey inay dhici karto in mooshin kan lamid ah laga keeno Raysalwasaare Xasan Cali Khayre.
Madaxweyne Farmaajo ayey in badan oo kamid ah Xildhibaanaa mucaaridka ah u arkaan inuu yahay tiirka ugu weyn ee uu ku taagan yahay Raysalwasaare Xasan Cali Khayre oo uu marar badan Madaxweynaha diiday inuu bedalo ama ka horyimaado hawshiisa.